सुरेनलाई चटारो : महिना दिन नपुग्दै १२ गीत रेर्कड ! | Screennepal
सुरेनलाई चटारो : महिना दिन नपुग्दै १२ गीत रेर्कड !
२०७४, २८ माघ आईतवारscreennepalfeature, Music0
काठमाडौं, २८ माघ । गायक सुरेन ताम्लिङलाई हिजोआज यस्तो चटारो छ, मानौ उनलाई असार १५ नै लागेको छ । पेसा र कर्मले उनी ब्रिटिस आर्मी हुन् । जो परेड खेलिरहेको हामी महश्स गछौं । तर, त्यसो होइन, उनी गायनमा व्यस्त छन् हिजोआज । उनको यो व्यस्तता देख्दा लाग्छ, ‘नेपालमा मैह्ुँ भन्ने गायक÷गायिका पनि यति व्यस्त नहोलान् ।’
हो, यसै महिना उनले दर्जन गीत रेकर्ड गर्न भ्याए । अझै कति भ्याउने हु्न् । ‘आफ्नो’ नामक गीति एल्बम ल्याएर संगीतलाई औपचारिक रुमा अंगालेका सुरेन दुई एल्बम ल्याउने योजनासहित नेपाल आएका हुन् । त्यसैले पनि उनी हिजोआज दैनिक जसो गीत रेकर्डिङमा व्यस्त छन् ।
सुरेनले निकट समयमै आफ्ना दुई एल्बमसार्वजनिक गर्न लागेका छन् । सार्वजनिक गर्न लागिएको गीति एल्बममा पूर्वेली भाका, आधुनिक, पप र ‘डान्सिङ बिट’ का गीत रहने सुरेनले जानकारी गराएका छन् । सार्वजनिक गर्न लागेको गीति एल्बममा समेटिएका गीतले श्रोता तथा दर्शकको मन जित्नेमा आफू ढुक्क रहेको उनले बताए ।
Previous Postमाई भ्यालेनटाइन : आमा अनि प्रेमिका, महत्व कसलाई ? (पूरा फिल्म) Next Postभ्यालेन्टाइन डे नजिक तिर्थराजले ल्याए यस्तो गीत (भिडियो सहित)